स्ववियु चुनावको आगामी कार्यदिशा
आकाश कार्की, नेपाल ल क्याम्पस देश यतिबेला स्थानीय तह र प्रादेशिक चुनावको सँघारमा उभिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा यी तहका चुनाव सम्पन्न गर्नमा निर्भर रहने गर्दछ । भुमरीमा फसेको स्व.वि.यु चुनाव उमेर हदबन्दि, निर्वाचन प्रणाली लगाएतको मुद्दामा केन्दि«त भई ने.वि.संघ भित्रका केही असन्तुष्ट पक्षले लगाएको तालाबन्दि खोल्ने निर्णय साथै त्रि.वि....
बैंक, वित्तीय संकट र हाम्रो सामाजिक दायित्व
उपेन्द्र पौड्याल ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ भ्यालुज (जीएबीभी) फोरमले जहिले पनि नाफाभन्दा पहिले आम जनतालाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपालमा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्र र विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक नीति ल्याएका छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामी (बैंकहरु) ले यो मुद्दामा कतै न कतै बाटो बिराउँदै आएका छौं । सन् २००७/८ मा विश्वमा देखिएको वित्तीय...
मान्यजनलाई ढोग्दा लाज लाग्ने, नागाबाबा ढोग्दा रमाउने ?
यमुना अर्याल (काफ्ले) शिवरात्रिको दिन टेलिभिजनहरुले पशुपतिनाथ मन्दिरको दृश्य लाइभ गरिरहेका थिए । अनलाइन पोर्टलहरुमा पनि समाचार आइरहेका थिए । पशुपतिमा रहेका नागाबाबाहरुको नानाथरी फोटो यत्रतत्र देखेँ । साढे तीन वर्षको छोराले त्यस्तो फोटो देख्ला भन्ने पीरले बन्द गर्दै थिएँ, छेउमै बसेको छोराले देखेर सोधिहाल्यो, ‘त्यो बाबाजी किन नाना नलगाई बसेको मम्मी ? बाबाजीलाई लाज...
महेश श्रेष्ठ - नारी परम्परादेखि नै शोसित हुँदै आएको कुरा साँचो हो । संसारका सबै जसो धार्मिक ग्रन्थका लेखक पुरुष हुन् । अनिती ग्रन्थका व्याख्याता पनि पुरुषै हुन । अनि धर्मका अगुवाहरु पनि पुरुष नै हुँदै आएका छन् । विवाहको कर्म गर्दा कन्यादान गरिने प्रचलन हिन्दु संस्कारमा छ । निर्जिव वस्तुको पो दान दिन सकिन्छ । तर हिन्दु धर्मालम्बीले कन्यादान गर्दै आएका छन् । दानमा पाएकै...
रबीन्द्र मिश्रलाई प्रश्न: दाजु ! कहाँबाट शुरु गर्नुहुन्छ देश बनाउन ?
सरगम भट्टराई राजनीति धमिलिएको बेलामा सकारात्मकता बोकेर देश साँच्चै बनाउन भनेर राजनीतिमा लागि पर्नु भएकोमा म मेरा प्रिय आदर्श पात्र रबीन्द्र मिश्रलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। मेरो यो आलेखको आशय उहाँ बिरुद्दका बिमतिलाई प्रश्रय दिन होइन, बरु उहाँको अभियानमा होस्टेमा हैँसे हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। केही वर्ष पहिलेदेखि देशमा एउटा फ़रक धारको बैकल्पिक शक्तिको...
डा. प्रविण श्रेष्ठ उमेर बढ्दै गएपछि नसा च्यापिने समस्या देखा पर्छ । अस्वस्थकर जीवनशैली तथा उमेर पुगेका ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका तथा प्रौढमा नसा च्यापिने समस्या बढि हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा युवा समुहमा पनि नसा च्यापिने समस्या देखापरेको छ । आजका युवा पुस्ता मोटरसाइकल तथा साइकलमा हिँड्ने र बाटो पनि खराब भएको कारण मोटरसाइकलले बढी उफार्दा यस्तो समस्या आउन थालेको हो...
'औषधिमा भारतको जस्तै सुविधा र बंगलादेशको जस्तो नीति चाहिन्छ'
दिपकप्रसाद दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ २०७३ वैशाख १ गतेबाट लागू हुनेगरी औषधि दर्ता कार्यविधि आएको छ । कार्यविधि बनाउनु ठिक हो । तर कुनै पनि कार्यविधि बनाउँदा त्यस क्षेत्र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ । यहाँ त अमेरिका, बेलायत जस्ता पश्चिमा देशमा यस्तो व्यवस्था छ भन्दै ‘कपी पेस्ट’ मात्र गर्ने चलन छ । यहाँको परिवेश नबुझी कार्यविधिमा...
विद्यार्थीले राजनीति सिकौं, तर नगरौं
विनोद भण्डारी । पार्टी वा संगठनको झण्डा अंकित पाठ्यक्रमहरु, सोलुसन म्यानुअलहरु सित्तैमा बाँडिन थालिएको छ । मदन भण्डारी, विपि कोइराला र कम्युनिस्ट नेताहरुको तस्वीर छापिएका टिसर्टहरु नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो संगठनतिर झुकाव बढाउने ललिपप बनेका छन् । क्याम्पसहरुका नजिक रहेका होटलआदिमा अब धेरैले निःशुल्क खाजा, मासुभात खान पाउनेछन् । विद्यार्थी संगठनको...
किन चाहिन्छ डायटिसियन?
खाने कुराको मामिलामा हामी उतिसाह्रो ध्यान दिँदैनौँ। खास भन्नुपर्दा बिरामी नपरी खानेकुराको विषयमा धेरैले वास्ता गर्दैनन्। के हामीले खाइरहेको खानेकुरा सन्तुलित छ? पोषणयुक्त छ? पौष्टिक तत्व छ कि छैन? कस्ता खानेकुरा कसरी खाने? यस्ता प्रश्नले धेरै मानिसलाई छुँदैन। बस, खान पाए पुग्छ। तर, आहार विज्ञानले खाने कुरालाई त्यति सामान्य मान्दैन। खानाको सन्तुलन र शरीरको सन्तुलन...
अर्चना बगाले स्वास्थ्यकर्मीले अन्य पेसाका मानिसले जस्तो व्यक्तिगत जीवन जिउन पाउँदैनन्। बिरामीको सेवामा दिनरात नभनी खट्नुपर्ने यो पेसाका मानिसले आरामलाई भन्दा कामलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। २४ सै घण्टा सेवा दिने अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी पनि २४ सै घण्टा तयार अवस्थामा रहनुपर्छ। देख्ने र भन्नेलाई सजिलो होला, अस्पताल गयो, जागिर खायो...
भूमिराज पराजुली - म कामका लागि विदेश कहिल्यै जान्न । मेरो सीप, लगनशिलता र मेहनत मेरै देश, मेरै ठाउँलाई दिन्छु । मैले धेरै पढ्नुछ । पढेर नेपालमै कुनै एउटा क्षेत्रमा नाम उज्वल बनाउनु छ । मेरो मिसन आफ्नै देशमा मेरो फरक पहिचान बनाउनु हो । यी मेरा ‘पञ्चप्रतिज्ञा’ आज भन्दा सातवर्ष अघिका हुन । त्यसबेला जोशजाँगरका साथ क्याम्पस गइन्थ्यो । केहि सामाजिक काम गर्ने संघसस्थातिर आवद्ध...
अनिल रेग्मी प्रिय चिकित्सा प्रणय दिवसको शुभकामना! जिन्दगीको यात्रामा तिमी साथै रहने भएकाले पत्रमा प्रिय भनेर सम्बोधन गरेँ। तिम्रो न्यानोपनले गर्दा सम्बोधनमा पनि 'तिमी' लेखेँ। तिमी भनेर सम्बोधन गरेपछि मनका कुरा धकनफुकाई खोल्न बहुत सजिलो हुँदो रहेछ। मैले त्यस्तै अनुभव गरिरहेको छु। नत्र यति लामो पत्र मैले कोर्नै सक्दिन थिएँ सायद। पुराना डायरीका पाना पल्टाउँदा पनि...
राधाकृष्ण मैनाली - त्यस बेला (०४६ सालको जनआन्दोलन भइरहेको बेला) राजदरबारमा जान अनिवार्य दौरा–सुरूवाल लगाउनपर्ने रहेछ । वार्तामा म सहभागी हुने निश्चित भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले आरकेजी दौरा–सुरूवाल लगाउनुपर्छ है भनेका थिए । दौरा–सुरूवाल लगाउनुपर्ने भएपछि सेनाकै गाडीले मलाई पाटनको मेरो कोठामा पुर्‍यायो । मसँग वीरगन्ज जेलभित्र सिलाएको एकजोर पुरानो...
माघ २२ । २० जनवरी २०१७ का दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्को गरी धमाधम सुरु गरेको निर्णयसँगसँगैै विश्व राजनीतमा नयाँ तरङ्ग उब्जिएको छ । विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्यस बखत अमेरिकी जनताको ध्यान र मत आकर्षण गरी...